GRG – Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle : 1932-2008 Madagascar – HOMMAGES (Suite) 23 septembre, 2008
Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Femme,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny,poèmes,Solidarité	, 1 commentaire
Poety, mpanoratra, mpikabary, mpitoriteny, manandratra ny teny malagasy
« On a surtout connu GRG à travers une émission de la Radio Madagascar, « Feom-baliha mena masoandro » qu’elle a réalisée avec Ener Lalandy.
Elle a déjà publié plusieurs livres et a écrit dans des journaux, « Sakaizan’ny tanora », « Malagasy ara-drafitra », « Fisainana GRG tononkalo » et « Fisainana GRG tantara sy sombin-tantara » …- Annick Sedson, Les nouvelles, 22.09.2008 »
Malahelo ny fo amam-panahy amin’izao fandaozan’Itompokovavy Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle antsika izao.Mirary faherezana sy fiononana feno ho an’ny Fianakaviana manontolo aho sady mitondra amim-bavaka.
Indro misy tononkalo nosoratako ho fiombonam-po amam-panahy amin’izao fisarahana an-tany izao. Fehezam-boninkazo atolotro an’i G. R. G.
Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle, Mpitandrina.
TONONKALO – POEME
(Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle 1932-2008)
« Maty i G. R. G. »,
Hoy ny feo re.
« Ramatoa Georgette RANIVOARIVELO Gabrielle e ! »
Mova tsy ny feon-dakolosy ny fandrenesana izany
Dia feon-dakolosy izay manaitra avy hatrany
Mampahatsiahy fa ny fiainana an-tany
Tsy mateza, eny mielina ihany
Mibosesika ao anaty mifanao tsy omby aloha
Ny momba azy rehetra, malahelo ery ny fo !
Vehivavy malagasy tena niavaka tokoa
Mpanoratra hafa kely koa
Ny teny aok’izany
Sy ny Valiha
I G. R. G.
Ary angaha izany ihany ? Anisan’ny lisy,
Amin’ny lisy. Anisan’ny lisy,
Nanam-pinoana, dia finoana
Narahina asa ka niezaka
E reroy !
Andrarezin-diteratiora, nampakatra avo ny Faneva,
Nampamerovero hanitra ny kanto sy ny meva
Tsy niamboho adidy fa niezaka, nilofo
Ho fitaizana hatrany ny solofo
Sy ny dimby. Koa raha lasa
Izy ankehitriny, ny asa
Banga anao ny toerana ry Vehivavy mendri-piderana
Banga anao ny toerana. Ianao namonjy ilay fitàna.
Isaorana ny Mpahary nampisy anao teto an-tany
Fahasoavan-dehibe ho an’ny taranaka izany
Fahasoavan-dehibe ny fandalovanao tety
Kintan-diteratiora namiratra ery.
Koa mandria am-piadanana
Nanana olona ka nanana
I Gasikara nisy anao
Ny soa fihary
22 septambra 2008, Frantsa
GRG – Georgette Ranivoarivelo Gabrielle (1932-2008) Madagascar: SES DEBUTS 22 septembre, 2008
Posté par rahelys dans : A lire,Culture,Enfance - Jeunesse,Femme,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny	, ajouter un commentaire
Une grande dame de la littérature malgache
Comment elle a débuté dans la conception et l’écriture de nouvelles
Nanomboka namorona sy nanoratra tantara fohy
: « Fony aho vao fito taona monja dia nividianan’i Dada saribakoly miteny. Haiko tsara ny mamahana azy ka sady mamindra izy no miteny hoe : papa – maman – bebe. Nahita hevitra aho ka nantsoiko ny namako, ary nanao tantara aho. Indray andro tsy fantatro akory fa hay ny Raiko mihaino ahy koa fa tsy hitako.
Tapitra ny tantara dia nofahanako ilay saribakoly sady navelako nandeha sy niteny teo anoloanay.
Nitehaka mafy i Dada sady nanoroka ahy, ny namako koa nitehaka sady nihorakoraka.
Iza hoy i Dada no namorona izany tantara izany ?
Izaho hoy aho, fa teto ihany aho no namorona azy ; saingy tsy tadidiko izay notantaraiko fa ny faramparany ihany no tsaroako.
Hay, rehefa vita ny fianarana enti-mody, dia mamorona hafa indray ary soraty avy hatrany. Iny ny vola dia mividiana cahier. Nitehaka indray ny namako.Dia hoy aho hoe : »aza misy milazalaza amin’ny namana hafa fa aleo isika ihany no hahalala izany.
Tandremo hoy i Dada fa ny fianarana aloha vao ny harentsaina.
Mianara tsara sombiniaiko an ! Raha mahay tsara ny zanako dia avelako mamorona tantara sy tononkalo hatrany o ! »
In FISAINANA, Teny mialoha, p3, imprimerie 2000, juin 2008
GRG – Georgette Ranivoarivelo Gabrielle (1932-2008) Madagascar: Poète, écrivain, prédicateur et oratrice – HOMMAGES
RADO – HOMMAGES 21 septembre, 2008
Posté par rahelys dans : A lire,A visiter,Culture,Hommages,Identité malgache,poèmes,Solidarité	, 1 commentaire
AVY AMIN’NY FIANAKAVIAN’
Maneho fisaorana sy fankasitrahana mitafotafo amin’ireo rehetra nahatsiaro, niombom-po sy alahelo tamin’ny fianakavian-dRado eto izahay.
Fa na lasana aza Rado ka mbola eo ireo rehetra miantsa, manandratra, mikalo ny tsangan’asany dia mbola isan’ny velona izy.
Nodimandry i RADO. Malahelo isika rehetra. Tsy hay ny hangina. Indro misy tononkalo atolotro ho mariky ny fiombonam-po amam-panahy manoloana izao fandaozany antsika izao.
Mirary faherezana sy fiononana feno ho an’ny Fianakaviana manontolo aho sady mitondra amim-bavaka.
Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle
(1 oktobra 1923 – 15 septambra 2008)
Lasa ianao ka nandao ity tany fivahiniana
Lasa ianao ka nandao. Tsy hoe fanahy iniana
Fa tonga ny fotoana dia tsy maintsy mandeha
Na dia tsy foin’ny rehetra, Tabiha sy Rehareha.
Lasa ianao ka nandao ry Andrarezim-pirenena,
Voarabe endriky ny saha, ka tsy hainay fefena
Tsy hirotsaka ny ranomaso. Mivoaly mainty koa
Indrisy ny lanitry ny literatiora, banga anao !…
Lasa ianao ka nandao. Ny asa soratrao mitoetra.
Tsy ho lovin’ny fotoana, mampitraka raha joretra.
Ny mamy navelanao hotohofin’ny taranaka,
Azo anovozana hery raha sendra valaka sy lanaka.
Lasa ianao ka nandao ny fiainana eto an-tany,
Vata-mangatsiaka sisa. Ny Firenena injao tomany.
Kintan-Telonohorefy, dify teo Ilay Olomanga,
Lasa tsy hifody intsony. Ny toeranao dia banga.
Tononkalo narindrako ho fahatsiarovana ny Fankalazana ny faha-80 Taonan’i RADO tao Ankorondrano tamin’ny 01 oktobra 2003
(01 oktobra 2003, Ankorondrano, Antananarivo)
Taom-bolofotsy hafa kely, fanandraman-tsira niavaka
No notronin’ny rehetra, niantomboka tamin’ny vavaka.
Olo-manan-kaja maro no indreo tonga mirodorodo
Hanandran-tsira amin’izato fahavalopolo taonan’i Rado.
Fanompoam-pivavahana no nanombohana ny fotoana,
Fisaorana an’Andriamanitra, ny fahasoavany tsy foana.
Ny valopolo taona lasa namela dindo hatrany hatrany :
Tao ny mamy, ny mangidy, fomban-tany ihany izany.
Dia natao ny andran-tsira, antsan-tononkalo notsongaina,
Ny maso finaritra mitazana, indray mientana ny fo sy saina.
Fanandraman-tsira sarobidy ka satry hitohy fa tsy hitsahatra
Saingy ny fotoana moa voafetra ka tsy ahazoana mamahatra
Dia notsofiny ny labozia, niredona hira ireo taranany.
Nirefodrefotra ny tehaka, nitohy toa tsy hisy farany.
Dia nisaotra koa i Rado satria ny famoaham-boky
No tomombana dia tao ireo sady kiady koa no toky.
Dia nasaina ny rehetra hihinana ny mofomamy sady hijery
Ihany koa ny peta-drindrina sy sary rehefa avy nanovo hery
Tamin’ito takarivam-panandraman-tsira niavaka
Ka Ilay Voninkazo adaladala dia sady rado koa no ravaka.
Antananarivo 01 oktobra 2003
RADO – FOTOAM-PIVAVAHANA IRAISAM-PINOANA 03.10.08 PARISY 17 septembre, 2008
Posté par rahelys dans : Culture,Hommages,Prieres	, ajouter un commentaire
Ny fianakaviana manontolo, ny Havatsa-UPEM sampana Frantsa, ny fianakaviamben’Haisoratra Malagasy eto Frantsa dia mampandre antsika ny nahalasàna ny Ray aman-dReny lehibe …
Georges ANDRIAMANANTENA – RADO
Poety sy Mpanoratra
Ny alatsinainy 15 septambra 2008, rehefa nivahiny 85 taona teto an-tany.
Banga olomanga ny Haisoratra sy ny Vahoaka Malagasy.
Hisy fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra sy ho fampaherezana ny fianakaviana ny Zoma 03 Oktobra 2008 amin’ny 8 ora alina ao amin’ny FPMA Paris, 16 rue chauchat 75009 – Paris, ho tarihin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana Malagasy aty Frantsa (FFKM-Frantsa). Sady ho fahatsiarovana ny faha-85 taona nahaterahany.
Izany dia hatrehin’ny Masoivohon’ny fanjakana malagasy eto Frantsa, Andriamatoa Narisoa RAJAONARIVONY sy ny Masoivoho eo anivon’ny UNESCO, Ramatoa IrèneRABENORO.
Hanasana antsika malagasy rehetra aty am-pitan-dranomasina.
Aza misalasala manaparitaka izao filazana izao.
Ity no ho solon’ny fampandrenesana.
…Ary dia mitodika aho … ireto soratsora-mamiko
An-takela-taratasy … rehefa ela koa ny elany
Ka mitambatra izy ireo ho vatolahin’ny vinaniko,
Vangongon-tsarin’inona avy no hajorony sy havelany ?
Rado (Oktobra 1943)
2008 Année Internationale de la Langue maternelle – Taona iraisam-pirenena ho an’ny TENY – UNESCO (Tohiny) 9 juin, 2008
Posté par rahelys dans : Culture,Développement,Evénements HELI'S MADAGASCAR,Hommages,Identité malgache,Malagasy: Teny,Signification - Dikan'ny teny,Solidarité,vie quotidienne	, ajouter un commentaire
Participation de HELI’S MADAGASCAR E-Enseignement Association à 2008 – l’Année Internationale de la langue maternelle UNESCO.
De temps en temps, nous présenterons ici:
4 de NOS citations etc…
dont nous donnerons [ la LECTURE ] (1) selon « la méthode HELI’S MADAGASCAR » Copyright déposé + HELI’S KIDS (Visitez http://www.helis-madagascar.info site franco-malgache qui est basée sur cette méthode et des applications = Base de E- Enseignement HELI’S MADAGASCAR)
(1)[ Lecture selon Méthode HELI’S MADAGASCAR basée sur phonèmes,
ACCENT TONIQUE en majuscule]
1 – Try it and feel it
Essaie et apprécie
Andramo ary ankafizo
[ aNdraM aR aNkfiZ ]
2 – Watch and learn
Dinio sy ianaro
[ diniOU S ianaR ]
3 – La vache rumine, l’homme réfléchit
Ny omby mandinika, ny olona misaina, mandanjalanja
[ N ouMb maNdiniK
N oulouN misaIN maNdadjalaNdj ]
4 – Chaque jour est une vie, à toi d’en faire une bénédiction
Andro iray iainana, anjaranao manao izany ho fahasoavana
[ aNDR iraI iainaN
aNdjaraN maN zaN Hou faHasouavaN ]
par Olga HELISOA – E-Enseignement HELI’S MADAGASCAR